Nagu Saabsan - Fujian Nuomigao Technology Technology Co., Ltd.
"Soo buuxi shuruudaha macaamiisha oo dhaafo himilooyinka macaamiisha"
Fujian Nuomigao Technology Technology Co., Ltd waa soo saare xirfad-yaqaan ah daryeelka caafimaad shaqsiyeed iyo waji-bixin caafimaad, kuna faanaya aqoon-isweydaarsi heer casri ah, qalab wax soo saar horumarsan oo ay ku jiraan mashiinka maaskaro mashiinka lagu rito, Mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka ee Automatic.
Shirkadda waxaa lagu caddeeyay shahaadada diiwaangelinta qalabka Caafimaadka, shahaadada CE iyo shahaadada FDA. Ku qanacsanaanta macaamilka waa yoolkeena oo aan sii wadno kobcinta ganacsigeenna oo leh maamul xoog leh, horumarin iyo kaamilnimo waa hanuunin ganacsi oo aasaasi ah.
Shirkaddu waxay si habsami leh u dejisay nidaam qaab dhismeed dhameystiran leh iyo iib ballaaran iyo shabakad adeeg, waxayna sameysay xiriir iskaashi wanaagsan oo lala yeesho shirkado badan. Waxaan ku takhasustay maaraynta qalabka ilaalinta gudaha iyo dibedda. Shirkaddu waxay had iyo jeer u hoggaansamaysaa siyaasada maaraynta "daacadnimada, adeecista qandaraaska iyo tayada ku jiheynta leh", waxayna siisaa kumanaan alaabooyin ah iyo xalal u gaar ah macaamiisheeda. Waa shirkad heersare ah oo heer sare ah, oo dhameystiran oo xirfad-ilaalin xirfad leh ku leh daquanzhou, iyagoo ku siinaya difaac ilaalin iyo adeegyo tayo sare leh. Marka loo eego baahiyahaaga shaqsiyeed, waxaan ku siin doonnaa adeegyo latalin xirfadeed, iyo qaabeynta nidaamka badbaadada iyo badbaadada caafimaadka iyo faylalka wax soo saarka ee buuxinaya baahiyahaaga dhabta ah ee adiga iyo ururkaaga.
Waxa aan kuu soo bandhigno ma aha oo keliya alaabooyinka, laakiin sidoo kale xalal tayo sare leh iyo adeegyo wax soo saar! Waxaan sii wadi doonnaa inaan u hogaansanno fikradda adeegga "aan ka soo baxno shuruudaha macaamiisha, aan dhaafno waxyaabaha macaamiisha laga filayo", oo aan ku siinno alaabooyin iyo adeegyo tayo sare leh. Waxaan si dhab ah u rajeyneynaa inaan kula shaqeyno!